China 316L 316 Hot akakungurusa Stainless simbi ndiro kugadzira uye Factory | Huaxiao
316 yakakosha simbi isina simbi, nekuda kwekuwedzera kweMo element kune kurwisa kurwisa, uye simba repamusoro tembiricha rave nani, tembiricha yakakwira kusvika pamadhigirii 1200-1300, inogona kushandiswa pasi pemamiriro akaomarara. 316L imhando yemolybdenum ine simbi isina simbi. Nekuda kweiyo molybdenum zvirimo musimbi, kushanda kwese kwesimbi iyi kuri nani pane iyo ye310 ne304 simbi isina simbi. Pasi pemamiriro ekupisa akakwirira, apo kusungwa kwesulfuric acid kuri pasi pe15% kana kukwira kupfuura 85%, 316L simbi isina simbi ine huwandu hwakawanda. shandisa. 316L simbi isina simbi zvakare ine yakanakira kuramba chloride kurwisa uye saka inowanzo shandiswa munzvimbo dzemumakungwa. 316L simbi isina chinhu ine yakanyanya kabhoni zvemukati ye0.03 uye inogona kushandiswa mune zvinoshandiswa uko kubvisirwa zvisingaite uye kwakawanda ngura kuramba kunodiwa.
Sino Stainless Simbi Kugona nezve 316L 316 Hot akakungurusa Stainless simbi ndiro, 316 316L HRP, PMP
Ukobvu: 1.2mm - 16mm
Nhovo uremu: 0.5MT-3.0MT
316 Same giredhi kubva kune akasiyana nyika muyero
316 Chemical chikamu ASTM A240:
C：.00.08 ，Si ：≤0.75 Mn ：.02.0 ， S ：.00.03 ，P ：.00.045, Kr ：16.0～18.0 ，Ni ：10.0～14.0，
316 michina chivakwa ASTM A240:
316L Same giredhi kubva kune akasiyana nyika muyero
316L Chemical Chikamu ASTM A240:
C：.00.03 ，Si ：≤0.75 Mn ：.02.0 ， S ：.00.03 ，P ：.00.045, Kr ：16.0～18.0 ，Ni ：10.0～14.0，
316L Mechanical Imba ASTM A240:
Tensile simba:> 485 Mpa
Ziva Simba:> 170 Mpa
Kuenzanisa 316L / 316 uye 304 Stainless simbi Chikumbiro
304 simbi inogona kuramba ngura yesulphuric acid, phosphoric acid, formic acid, urea, nezvimwewo. Inokodzera kushandiswa kwakawanda kwemvura, uye inoshandiswa kudzora gasi, waini, mukaka, CIP yekutsvaira mvura uye dzimwe nhambo pasina kana kusangana nezvinhu. Iyo 316L simbi yegiredhi yakawedzera molybdenum element pahwaro hwe304, iyo inogona kuvandudza zvakanyanya kupokana kwayo necorgranular corrosion, oxide stress corrosion uye kudzikisira kupisa kunopisa maitiro panguva yekutenderera, uye zvakare ine yakanaka kuramba chloride ngura. Inowanzo shandiswa mumvura yakachena, yakadonhedzwa mvura, mishonga, sauces, vhiniga uye zvimwe zviitiko zvine hutsanana zvinodiwa uye yakasimba midhiya ngura. Mutengo we316L unenge wakapetwa kaviri pane we304. Iyo michina chivakwa 304 iri nani pane 316L. Nekuda kwekumira ngura uye yakanakisa kupisa kupisa kwe304 uye 316, inoshandiswa zvakanyanya sesimbi isina chinhu. Simba uye kuomarara kwe304, 316 zvakafanana. Musiyano uripo pakati pezviviri ndewekuti kuramba ngura kwe316 kuri nani pane kweye 304. Chinhu chakakosha ndechekuti molybdenum simbi inowedzerwa ku316, iyo yakagadzirisa kupisa kupisa.
Tinogona kushandisa simbi inosanganisa electroplating kana oxidation kuti ive nesimbi pamusoro pekabhoni, asi dziviriro iyi ingori firimu. Kana dziviriro yacho ikaparadzwa, simbi iri pasi inotanga kuita ngura. Iko kurwisa kwekuora kwesimbi isina chinhu kunoenderana nekromium element. Kana huwandu hwechromium hwakawedzerwa hwasvika pa10.5%, iyo yekumusoro ngura kuramba kwesimbi isina kuchena ichawedzera zvakanyanya, asi kana iyo chromium zvemukati iri yepamusoro, kunyangwe ichikwanisa kuvandudza kumwe kurwisa kwenyonganiso. Asi hazvisi pachena. Chikonzero ndechekuti kurapa uku kunochinja mhando yepasidhi oxide kune yepamusoro oxide yakafanana neiyo yakaumbwa pane yakachena chrome simbi, asi iyi oxide yakatetepa, uye inogona kuona zvakananga kubwinya kwechisimbi pamusoro pesimbi. Kugadzira Stainless simbi ine yakasarudzika pamusoro. Zvakare, kana iyo nzvimbo yaparara, iyo yakafumurwa simbi pamusoro ichaita nemhepo. Maitiro aya inyaya yekuzvigadzirisa, inoitazve firimu rekupfuura uye inogona kuramba ichidzivirira. Naizvozvo masimbi ese asina tsvina ane hunhu hwakajairika, kureva kuti, chromium yezvinhu iri pamusoro pe10.5%, uye giredhi resimbi rakasarudzika rinewo nickel, senge 304. Kuwedzerwa kwemolybdenum kunoenderera mberi kunovandudza kukora kwemhepo, kunyanya kurwisa kloride-ine maatmosifera, zvinoitika nemakumi matatu nematanhatu.
Mune dzimwe nzvimbo dzemabhizimusi nenzvimbo dzemahombekombe, kusvibiswa kwakanyanya, nzvimbo yacho ichave yakasviba, uye kunyange ngura yakatoitika. Nekudaro, kana iyo nickel-ine simbi isina simbi ikashandiswa, iko kuyevedza maitiro mune yekunze nharaunda kunogona kuwanikwa. Naizvozvo, yedu yakajairika keteni madziro, mativi madziro nedenga zvinosarudzwa kubva pamakumi matatu neshanu simbi isina waya, asi mune mamwe ane hukasha maindasitiri kana emumakungwa emumhepo, 316 simbi isina simbi isarudzo yakanaka.
304 18cr-8ni-0.08c Yakanaka ngura kuramba, oxidation kusagadzikana uye kugadzikana, inopokana neaerobic acid, inogona kudhonzwa, inogona kushandiswa kugadzira midziyo, tafura, simbi fenicha, chivakwa chekuvaka, uye zvekurapa
316 18cr-12ni-2.5Mo yakajairika mukuvakwa kwegungwa, ngarava, nyukiliya electrochemistry uye chikafu midziyo. Izvo hazvisi chete zvinonatsiridza kukora kuramba kwemakemikari hydrochloric acid uye gungwa, asi zvakare inovandudza iyo corrosion kuramba ye brine halogen mhinduro.
Pashure: 310s inopisa yakakungurutswa simbi isina waya
Zvadaro: inotonhora yakakungurudzwa simbi isina tsvina